Tirada dadka oo ka yar iyo deeymo ka badan oo la qabo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada dadka oo ka yar iyo deeymo ka badan oo la qabo
La daabacay onsdag 20 januari 2016 kl 12.28
6000 oo ka baxday diiwaanka Kronofogden
Sawirle: Fredrik Sandberg/TT.
Waxaa kor u kacay labadii sannadood ee ugu dambeeyey dhaqaalaha deeymaha lagu leeyahay ee dadyoowga ku jira liiska madow ee hayadda deeymaha khasabka ku soo celisa ee lagu magacaabo Kronofogden.
Kor u kacaasi ayaa gaarsii-san 2 bilyan oo koron. Halka dhanka kale ay hoos u dhacday tirada dadyoowga liiska hayadda ka diiwaan gashan.
Hayadda Kronofogden ayey ka diiwaan-gashenaayeen gabagabadii sannadkii ina dhaafay dadyoow gaarsii-san 428 000 oo ruux, kuwaasina oo lagu leeyahay deeyn gaarsii-san 72 bilyan oo koron. Tirada dadyoowga ka diiwaan-gashan hayadda ayaa u dhiganta bulshada ku dhaqan magaalooyinka Malmö iyo Lund oo la isku darey oo deeynta lagu leeyahayna u dhigantaa miisaaniyadda ciidammada qalabka sida ee dalka muddo sannad iyo bar gaarsii-san.
Johan Krantz, ahna sarkaal ka howl-gala hayadda Kronofogden ayaa sheegay in deeymaha kor-dheya loo galey siyaabo kala duwan.
– Waxey noqon karaan deeymo la xiriira cashuur, ganaax gaari meel khaldan la dhigay, deeymo bangiyada laga qaatay, biilka mobaaylka oo aan la bixin iyo deeymo kale oo lagu galey alaabo iibsi, sida uu sheegay.
Deeymaha lagu leeyahay bulshada Sweden ayaa kor u sii kacaya iyada oo weliba deeymaa laga galo dawladda ey masaxmaan muddo shan sannadood ah dabadeed, kuwaasina oo gaarsii-san sannadkii 4 bilyan oo koronka iswiidhishka. Halka dhanka kale ey hoos u dhaceen qiyaastii 6 000 oo ruux dadyoowga ka baxay liiska hayadda khasabka ku soo celisa deeymaha ee Kronofogden labadii sannadood ee ugu dambeeyey., sida uu sheegay Johan Krantz.
– Waxaa jira dadyoow badan oo deeymo ku qaatey guryahooda, oo haddii ribadu kor u kacdo ey qaar badan oo ka mid ahi dhibaatooyin kala soo gudboonaan kareyaan sidii deeymaha lagu bixin lahaa.
Dhanka kale waxaa jirta in xitaa haddii deeymaha hayadda Kronofogden soo gaara ey kor u kaceyaan 80 malyan bishii oo u dhiganta hal bilyan sannadkii ayaan la oran karin waa sawir buuxa.
Waxaa kaloo jirta in shirkadaha deeymaha soo celiya ee lagu magacaabo Inkassobolagen qudhoodu aaney hayadda la socodsiin deeymaha marar badan, maadaama ey shirkaduhu marar badan qiimeeyaan in aaney deeymahaasi aheyn kuwo dib looga soo celin karo ciddii lagu lahaa.
– Deeymahaa ayaa lagu qiyaaseyaa iney gaarsii-san yihiin bilyanno, sida uu sheegay Johan Krantz.